DREN Boeny: boky fampianarana 551 baoritra natolotry APIC | Région Boeny
DREN Boeny: boky fampianarana 551 baoritra natolotry APIC
Notanterahina ny zoma 05 aogositra lasa teo tao amin’ny CAPr Mangarivotra Mahajanga ny lanonana fizaràna boky fampianarana 551 baoritra avy amin’ny Association pour la Promotion d’Initiatives Citoyennes (APIC). Tonga nandray izany fanomezana izany ny Ministra Paul Rabary.
Boky hanatsarana ny kalitaom-pampianarana ireto natolotra ny DREN Boeny ireto. Samy hisitraka azy ireo avokoa ireo sekoly ambaratonga voalohany hatrany amin’ny Lycée rehetra na eto ambonivohitra na any ambanivohitra. Mitotaly 26 000 ny isan’ireo boky 551 baoritra avy amin’ny APIC ireo.
Tsiahivina fa efa tonga soa aman-tsara ihany koa ireo kits scolaires avy amin’ny Banky iraisam-pirenena ho an’ny taom-pianarana 2016-2017, ka tany Ambatoboeny no nanoloran’ny ministry ny Fanabeazam-pirenena azy ireo tamin’ny fomba ofisialy ny Alakamisy 04 aogositra 2016, vao hisesy izany ho an’ny faritra 21 sisa.
Ny APIC dia fikambanana laikan’ireo mpampianatra efa misotro ronono avy ao La Réunion ary efa sivy taona no nijoroany. Ny DREN Anôsy, tany Faradofay no nisantarany ny fanolorana boky miisa 12 000 miaraka amin’ny akanjo miisa 20 000 raha fitaovana ara-medikaly kosa no natolony tany Fianarantsoa.
Takianay ny hitsinjarana an’ireo boky fampianarana ireo mitovy lenta tsara eo anivon’ny CISCO sy sekoly tsirairay eto amin’ny DREN Boeny ahafahan’ny mpikambana APIC matoky sy mampitombo ny fanomezana manaraka hoy ny filohan’ny APIC, Atoa Philippe.
Nanome toky fa hitandrina izany hafatra izany miaraka amin’ireo mpahazo tombotsoa ary maniry ny hitohizan’ny fanampiana tahaka izao hatrany ny Lehiben’ny faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar, izay nanotrona sy nizara ireo boky niaraka tamin’ny ministry ny Fanabeazam-pirenena, Atoa Paul Rabary.
Ity farany izay nanamafy fa afaka tsara hifanome tànana amin’ireo rehetra izay malàla-tànana toy izao. Ny andron’io zoma io ihany dia nandeha tany amin’ny distrikan’I Mitsinjo ary nitohy ny ampitso tany Mahajanga II, ny delegasiona notarihiny, nanohy ny fitsinjarana ireo boky niaraka tamin’ireo Kits scolaires.